बैंकका कर्मचारीलाई ५ महिनासम्मको बोनस ! ~ Banking Khabar
बैंकका कर्मचारीलाई ५ महिनासम्मको बोनस !
बैंकिङ खबर/ बैंकहरुले अघिल्लो वर्षको हिसाबकिताब असार मसान्तमा सक्ने गर्दछन् । त्यसपछि अनुमानित नाफाका आधारमा केही बोनस साउन १ गते दिने गर्दछन् । अनि बाँकी रहेको बोनस साधारणसभा सकेपछि दिन्छन् । बैंक वित्तमा एउटा भनाइ पनि प्रचलित छ कि, ‘बैंकका कर्मचारी वर्षको दुई दिन मात्र खुसी देखिन्छन् ।’
सुविधाबाट ऋण लिएका कारण तलब काट्टिएर आउँछ । त्यसैले उनीहरु अरुबेला खुसी हुँदैनन् । तर, साउन १ गते र साधारणसभा सकिएको साँझ उनीहरु खुसी हुने गरेको बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीबीच ठट्टा हुने गर्दछ । कारण, बैंकहरुले अघिल्लो वर्षको हिसाबकिताब असार मसान्तमा सक्छन् । त्यसपछि अनुमानित नाफाका आधारमा केही बोनस साउन १ गते दिन्छन् । अनि बाँकी रहेको बोनस साधारणसभा सकेपछि दिन्छन् । त्यही भएर बैंकका कर्मचारी वर्षको दुई दिन खुसी हुन्छन् भन्ने ’जोक’ स्थापित भएको हो ।
यस वर्ष पनि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुवातमा केहि बैंक, वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई बोनश बाँडेका छन् । केहीले भने अझै ब्याज उठाउने समय बाँकी रहेकाले त्यसपछि मात्र हाल्ने तयारी गरेका छन् । केहीले भने साधारणसभा सकेपछि दिने तयारी गरेका छन् । हालसम्म नबिल बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, नेपाल एसबीआइ बैंकले नाफाबाट कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने भएका छन् । नबिल बैंकले पाँच महिनाको बाँड्दैछ भने नेपाल बंगलादेश, कुमारीले ३/३ महिनाको बाँड्दैछन् ।
राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाले सहज
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनश बाँड्न पाउने नीतिगत व्यवस्था मिलाइदिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बोनस वितरण गर्न थालेका हुन् । मौद्रिक नीतिले सेयरधनीलाई दिने लाभांशमा दायरा तोकेपनि कर्मचारीको बोनशमा भने हस्तक्षेप नगरेपछि बोनश ऐनअनुसार बैंकहरुले कर्मचारीलाई बोनश वितरण गरेका हुन् ।